Nanambara ny toerana misy ny vonjy taitra i Chile rehefa nipoaka korontana i Santiago
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Nanambara ny toerana misy ny vonjy taitra i Chile rehefa nipoaka korontana i Santiago
Ny filohan'ny filoham-pirenena Chili dia nanambara fa misy fepetra vonjy taitra taorian'ny hetsi-panoherana mahery vaika nateraky ny fiakaran'ny vidim-piainana ho an'ny fitateram-bahoaka tao an-drenivohitra Shiliana.
Mampiseho ny hatezerana ao afovoan-tanànan'i Santiago ireo sary mampivadi-po, satria nanjary nahery setra indrindra ny fihetsiketsehana tamin'ny zoma, miaraka amin'ny sary mampiseho olona mifandona amin'ny polisy misahana ny rotaka. Nirehitra ihany koa ireo mpihetsiketsika ny biraon'ny tapakila metro sy tranobe misy ny afovoan-tanàna.
Niresaka tamin'ny firenena tamin'ny fiandohan'ny asabotsy teo ny filoha Sebastian Pinera nilaza fa hiantso lalàna manokana momba ny fiarovana ny fanjakana izy hanenjika ireo mpanao fihetsiketsehana manana hoditra mainty izay nandoro, nandroba ary nanimba fotodrafitrasa ho an'ny daholobe.
Nampisondrotra ny vidin'ny fitsangatsanganana metro ny governemanta tamin'ny voalohan'ny volana oktobra, nahatonga ny mpianatry ny lisea sy ny anjerimanontolo hidina an-dalambe.
Nandritra ny lahateniny dia nampanantena i Pinera fa hiasa izy mba “hanamaivanana ny fijalian'ireo tratry ny fiakaran'ny saran-dàlana.”
Nikatona ny rafitry ny metro, ary nambaran'ny manampahefana fa "fanimbana lehibe" no nahatonga ny tsy fandehanana soa aman-tsara ny lamasinina.
Nikatona ny fizahantany any Barcelona niaraka tamina mpanakorontana feno hatezerana antsasaky ny tapitrisa teny an-dalana